:Bọchị: Jenụwarị 16, 2020
Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan nwere nzukọ na 2019 na Beştepe Millet Congress na Culture Center. Turkey mbụ anụ ụlọ na-azọpụtanụ mba ụgbọala prototype na-enye mba ekele President Erdogan, "Nke a [More ...]
N'ịdabere na mkpebi ewepụtara na Istanbul Metropolitan Municipality Council, ụmụ akwụkwọ na ndị na-enyocha ga-eme nyocha uhere a ga-eme na Istanbul n'etiti 18-19 Jenụwarị 2020, bọs ndị ụgbọ ala IETT, metrobus, Bus Inc., ndị ọha nkịtị. [More ...]
Mayor Kağan Mehmet Usta, onye na-aga n'ihu na-agba mbọ ịkwalite Bursa İznik, mere njem mbụ. Ankara metro, nke na-agba awa iri na ise ụbọchị ọ bụla, na-ebukwa narị puku mmadụ abụọ kwa ụbọchị. [More ...]
CDgbọ njem TCDD ewepụla ego maka ndị nkuzi niile, ụmụ akwụkwọ, ndị nwere nkwarụ na ndị ọrụ TCDD na ụgbọ klas azụmahịa, nke ndị azụmaahịa na-ahọrọ. Ndị njem nwere ike njem n'ụgbọ ndị a ugbu a site n'ịkwụ ụgwọ ụgbọ mmiri [More ...]
Mịnịstrị nke Transportgbọ njem na akụrụngwa gwara ndị ụgbọ elu ahụ na a gaghị anabata Sabiha Gökçen Airport maka ụgbọ elu ndị ọzọ. SözcüDika akuko si di na; Enweghị ike na okporo ụzọ dịka ihe kpatara mkpebi ahụ [More ...]
Minista na-ahụ maka ụgbọ njem na akụrụngwa Cahit Turhan kwuru na ha bidoro ọdụ ụgbọ elu Carbonless, na-ahapụrụ ụwa nke ga-adịkwu mma ma hụ na njikwa ọdụ ụgbọ elu na usoro ndị e mere megide okpomoku ụwa na mgbanwe ihu igwe. [More ...]
Kocaeli Obodo ukwu Ahụike na Ọha na Ọha na Ọha na Ndị Ọrụ Ọchịchị na Ndị Ọrụ Okenye, rụpụtara ezigbo ọrụ maka ụmụaka na-ahụ ụzọ. N'ọnọdụ a, ụmụ akwụkwọ nwere anya na Darica Peace Primary School [More ...]
Ndi Aliagali choro irite uru na oru ESHOT
Aliağa, ebe eji enye dolmuş njem, na-enwe nsogbu n’ime njem obodo. Ndị njem na-eme mkpesa banyere ụgwọ ọnwa, ugboro ole ha mere njem na ọpụpụ. Kwa ụbọchị, ọtụtụ narị ndị ọrụ na ndị ọrụ obodo na-eti okporo ụzọ site na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ ruo ọrụ [More ...]
TransportationPark, nke na-eje ozi n'okpuru nhazi nke Kocaeli Obodo na ationgbọ njem na Njikwa okporo ụzọ, na-ahazi njem dị iche iche iri na isii maka ule ikpeazụ nke Open Education ngalaba Fall Term na 18 na 19 Jenụwarị. [More ...]
Ndị ọchụnta ego zụrụ ala na ụlọ na-emepụta mkpụrụ ụlọ na-agwụ ike ugbu a maka ọtụtụ nsogbu ha na ndị ha na ha bi na-enwe. Ndị na-etinye ego a, ndị na-enweghị oge, na-achọ ihe ngwọta maka ndị na-ahụ maka ihe onwunwe na-enye ọnụ ọgụgụ dị nta nke ọrụ nchịkwa ọkachamara. [More ...]
Usoro okporo ụzọ Kocaeli 510 na 525 gbanwere!
Ngalaba cagbọ njem na Kọmitii Njikwa Ọchịchị nke Kocaeli, n'ikwekọ n'ụkpụrụ nke ụmụ amaala na-eme mmelite dị mkpa n'okporo ụzọ na oge nke ahịrị dị. N'ọnọdụ a, 510 na 525 [More ...]
Mgbasa ozi izugbe nke Üçyol - Buca Metro, nke a maara dị ka nnukwu ego na akụkọ ihe mere eme İzmir, ka ebipụtara na weebụsaịtị nke European Bank for Reconstruction and Development. Arịrịọ maka ndị na-achọ ikike na Tenders nke mba ụwa na afọ a [More ...]
Ndị ọrụ na-ahụ maka iwu ụgbọ ala Istanbul na-agwa: riesgwọ ọnwa bụ oge ezighi ezi, nri bụ Kurtlu
Ndị ọrụ nchekwa jikọtara na zlọ Ọrụ Njikwa Vizyon, otu n'ime ndị na-ahụ maka Şenbay-Kolin-Kalyon Production Partnership, gwara Network nke Bosses, na Dudullu-Bostancı metro saịtị nke Obodo isi obodo Metropolitan. Otu onye gbara ihe dịka ọnwa atọ gara aga, otu [More ...]